Shuruucda cusub ee ka hirgashey dalka. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shuruucda cusub ee ka hirgashey dalka.
La daabacay torsdag 5 juli 2007 kl 16.35
Laga bilaabo 1da Juulaay ee sannadka 2007-da
Shuruucda cusub ee ee hirgashey laga soo bilaabo koowda bisha Juulaay ee sannadka 2007-da, lana xiriira ama saameynta ku yeeshey nolosha bulshada.
Shuruucdaa kuwooda ugu yaabka badan waxey yihiin in la dambiyeeyey dadyoowga loo yaqaan Hakers-ka ee weerarka ku qaada bogagga internetka ee aaney jecleyn ama ka helin.
- Shaqa bixiyaha ayaa laga qaadey masuuliyaddii saareyd ee la xiriirtey howlaha dib ugu soo celinta shaqada ruuxa xanuunka ku qorraa.
- Abuuritaanka goobaha caafimaad ee mulkida loo leeyahey oo la sahley.
- Rektarada ama mamullada iskuulaadka oo loo sharciyeeyey iney qasab iskuulka uga wareejin karaan ardeyga rabshada badan.
- Lacagta lagu bixiyo adeegga sida gurixaaqidda iyo wixii la mid ah oo la dhimey, waxeyna ka mid yihiin waxyaabaha dadka qaarkii ka farxin kara hase yeeshee waxaa la kordhiyey qidmadaha qarkood sida gawaarida iyo ceymiskooda.
Waxyaabahaa iyo qaar kaleetaba waxey ka mid yihiin 13-ka sharci iyo 44-ka waxa lagu magacaabo förordninmg oo ah shuruucda dhabbatuska dawladda ee ka higeashey dalkan laga bilaabo 1-da bisha Juulaay ee 2007-da.
Heyadda isdhexgalka oo albaabka loo laabey. Hoowlaheediina leysku shaandheeyey. Laguna kala wareejiyey heyado kala duwan.
Middaa oo aannu ka warreysaney sarkaal ka howlgeli jirey heyadda is-dhexgalka.
Shuruucda ku cusub heyadda suuqa shaqada waxaa ka mid ah in laga xayuubiyey masuuliyaddii saareysd shaqabixiyaha, lana xiriirtey inuu gacan ka geysto sidii dib loogu soo celin lahaa suuqa shaqada dadyoowga muddada jiro ku qorraa.
Sidoo kale waxaa la baabi’iyey xuquuqdii uu shakhsigu u lahaa inuu raadsado oo keliya xirfaddiisa ama ka raadsado deegaankiisa boqolka maalmood ee ugu horreeya ee shaqa la’aantu la soo gudboonaato.
Waxaa sidoo kale soo baxdey shuruuc sahleysa sidii lagu shaqa gelin lahaa dhallinyarada, middaasina oo la dhimeyo khidmadda ey dawladdu ka qaado heyadda howlgelisa iyo sidaasi si la mid ah ajnabiga. Instegsjobb iyo waxa loo yaqaan Nystarts jobb.
Abuurka shaqada ayaa ka mid ahaa sababaha ey ku guuleysatey dawladda awoodda dalka gacanta ku heysa.
Tallaabooyinka ey middaa ku hirgelineyso waxaa haddaba ka mid ah in la dhimo qidmadda hoowlaha adeegga ee guryaha.
Saddex milyaard oo koron ayaa lagu qiyaasey dhaqaalaha ku bixi jirey adeeggaa, gelina jirey howlo lagu fuliyo suuq madow.
Iyada oo loo tabaabusheysaneyo middaa ayey dalka ka abuurmeen bilihii hore ee sannadkan shirkado gaareya 824 ee adeegga, waana 25% dheeraad haddii loo brbar dhigo sannadkii hore oo ey abuurmeen tiro dhan 600.
Dadyoowga abuurey shirkadahaa adeegga waxaa ka mid ah Abuukar Xamud Sayid.
Wxaxaa horraanta bisha Agoosto ee sannadkan di loo bilaabi doona cashuurtii tijaabada ee laga qaadi jirey gawaarida ku gooshta farasmagaalaha Istockholm, loona yaqiin trängsel skatt.
Qidmaddaa oo aheyd mid horey loo tijabiyey, ayaa lagu kordhiyey tagaasida iyo basaska in laga qaado, halkii ey horey uga fasaxnaayeen.
Haddii aan u tallaabsano shuruucda ku cusub dhanka wasaaradda bulshada waxaa la go’aansadey laga xayuubiyy masuuliyaddii saareyd shaqabixiyaha ee la xiriirta carbinta shaqaalaha muddaba ku qorraa jirro, iyo sidoo kal in ribad la saaro dhaqalaha ku maqan ama si qaldan loo siiyey ee ka baxa heyadaha dawladda. Socialka, ceymiska iyo wixii la mid ah.
Arrinkaasina oo foodda la galaya sharciyada cusub ee ku soo biirey wasaradda shuruucda ee oranaya in maxkamad la horkeeni kareyo, shakhsiga si ula kac ah u lunsada ama u qaata dhaqaale kaalmo ah ee aannu xaq u laheyn.
Wasaaradda dhaqaalaha aya masuuloyad loo saarey hirgelinta shuruucda sida dhimidda cashuurta dawladda ee dhalaanka garey 18 sannadood, islamarkaana ka yar 25, hddii la howlgeliyo.
In adeeg walba lagu waajibyey khasnado diiwaangashan,marka laga reebo ganacsiga yar yar sida waratada.
Iney diiwan geliso cid walba ee soo galeysa ama ka baxeysa xuduudda dalalka midowga Yurub ee sidaa lacag wixii ka badan 10 000 oo lacgat euro-ga loo yaqan.
Weli waxaa halkiisii inooga socda barnamijkii la xiriirey shuruucda cusub ee dalka ka hirgashey laga bilaabo 1-da bisha Juulaay ee sannadka 2007-da.
Halka aad naa dhageysaneysaanna waa Codka, idaacadda calamiga ah ee raadiyaha Iswiidhen, laanteeda afka soomaliga.
Iyo ugu dambeyn haddii aan u gudubno dhanka waxbarashada ayaan ka maqneyn goobaha ey saameynta ku yeesheen xeerarkan cusub ee hirgaley laga bilaabo maalintii Axadda taariikhduna ku beegneyd koowdii bishii Juulaay ee sannadkan 2007-da..
Maxanmuud Cali Shiikh Abuukar, wuxuu ka mid yahey macallimiinta wax ka dhigta iskuul ka mid ah iskuulaadka ku yaala degmada Istockholm, waana ammur sida uu noo sheegey u arko mid wax ku ool ah, shuruucdan ka hirgeli doonta iskuulaadka.
Bare Maxamuud ayuu ahaa iyo dhallaan taagnaa goobta aan wareysigu ka dhacayey oo fikirkooda ka dhiibtey sharcigaa cusub ee ka hirgeley iskuulaadka.